ဘယ်သူပိုချောလဲဟင် :P :D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဘယ်သူပိုချောလဲဟင် :P :D
ဘယ်သူပိုချောလဲဟင် :P :D
Posted by စဆရ ႀကီး on May 28, 2011 in Arts & Humanities, History | 19 comments
နှုတ်ခမ်းမွှေးလေးနဲ့ကတော့ ခန့်ချောကြီးပဲ နောက်တာ
ဝေခွဲမရလို့မေးတာလား။ သိချင်လို့မေးတာလား။ကြွားတာလား။ ကျီးကန်းနဲ့ ဘဲဥ ဘယ်သူဖြူသလဲလို့ မေးသလိုဖြစ်နေပြီ။
ဘယ်သူပိုချောလဲတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ KFC တော့ တော်တော်ဝါးမယ့် ပုံပဲ :-)
ဘယ် KFC Shop ကလဲ။
ကျောင်းဆရာကြီးတွေချည့်ပဲ………ဟီးး လလဲ လပဲနဲ့
မဟုတ်မှလွဲရော ညာအစွန်က ရှုံး-လူဖြစ်ရမယ်။တွေ့ရင်မသိမှာစိုးလို့ ရုပ်ပြထားတာလား
နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးနဲ့ လူဖြစ်နေရင်ကော။သူ့ဒီဇိုင်းက ပိုပြီးလန်းသလိုပဲ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ၊ အကျီင်္အရောင်နဲ့ အသားအရောင်နဲ့။ ပြီးတော့ နားမှာလည်း ဘာလိုလိုဟာကြီးတစ်ခုတတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ဟား..ဟား… အလန်းအလန်းနော်….. ကလင်.ကလင်.:)
နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးနဲ့ လူဖြစ်နေရင်ကော။သူ့ဒီဇိုင်းက ပိုပြီးလန်းသလိုပဲ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ၊ အကျီင်္အရောင်နဲ့ အသားအရောင်နဲ့။ ပြီးတော့ နားမှာလည်း ဘာလိုလိုဟာကြီးတစ်ခုတတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ဟား..ဟား… အလန်းအလန်းနော်….. ကလင်.ကလင်.
ဘယ်သူပို ချောလဲဆိုတာ ပုံကြည့်ပြီး ပြောလိုမရဘူး ဂျ လက်တွေ့လူအသားကိုကိုင်းကြည့်မှ သိရမှာ
တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့.. ကွဲပြားနေတာ အသိသာကြီးပါ။
ပါကီ..။အိနိ္ဒယ..ဒါမှမဟုတ်.. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က.. လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့..တွဲရိုက်ထားတာဖြစ်ရမယ်.။
လူမှားမှာမို ့.. ကြိုတင်ပုံတင်ပေးထားတာမှာ… ကေအက်ဖ်စီ ယူနီဖောင်းနဲ့ဆိုတော့.. ကေအက်ဖ်စီအကြောင်း ကျွမ်းကျင်မယ်မှတ်တယ်..။
မြန်မာပြည်က… ကြက်ကျော်ဆိုင်တွေက .. ကိုစိုင်းရောက်ခိုက်… အကြံဉာဏ်လေးများ တောင်းကြဖို့ကောင်းတယ်..။
အားရင်.. ပညာခန်းလေးတွေများ.. ရေးပြပါဦးနော..။
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ says:
ကိုခိုင်ရေ.. ရေးမလို့တော့ စဉ်းစားထားတယ်.. ဒါပေမယ့် ခုလောလောဆယ် ပြန်ဦးမယ်ဆိုတော့ကာ အချိန်မရနိုင်သေးသလို ပြန်ပြီးရင်လဲ နောက်တစ်နိုင်ငံမှာ ရုန်းကန်နေရဦးမှာမို့လို့ ဒီဘက်ကို အချိန်သိပ်မပေးနိုင်သေးရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…
ဘယ်သူပိုချောလဲ ဆိုတော့ ကုလားမလေးက နုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ကိုကိုမှ ချောတာတဲ့..
တရုတ်မလေး မျက်စိမှေးမှေး ကိုကိုမှ ချောတာတဲ့..
ဆူး ပြောတာ ဟုတ်ဘူးနော်.. ကြားဖူးတာ ပြောပြတာ…
ရှုံး….လူ (ဘယ်တစ်ယောက်မှန်း မသိ) အချောဆုံးပါ။ (တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဒကာများခံမလားလို့ မြှောက်ကြည့်တာ။)
အခုတင်ထားတဲ့ အဖွားကြီးပုံက အချောဆုံးပဲ
ူlogo ပုံကိုပြောဆိုရင်တော့ အဲဒါအဘွားကြီးမဟုတ်ဘူး etone ရဲ့။ အဲဒါ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ်တသာရဘိဝံသ တဲ့ မေတာဘုန်းကြီးလေ။ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တာ (၁၅) နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရော့မယ်။ ကတောင်မကလောက်ဘူး။
သူတင်ထားတာ ဘုန်းကြီးပုံ မဟုတ်ဘူးလေ..
မျက်မှန်နဲ့ အဘိုးကြီး အနောက်မှာ နီနေတာ ကိုးဂိတ် သွားတိုက်ဆေး ဘူးတွေ စီထားတာ..
ကဲ … ကိုရှုုံးလူရေ. ဘယ်သူပုံလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါဦး။
ကိုရှုံးတော့ အာရုံနောက်နေရော့မယ်။ ဘယ်သူချောလည်းကနေ logo ဘယ်သူပုံလဲဆိုတာကို ဦးတည်သွားတယ်။ ဆောရီးပါရှင်…………….
ဘယ်ပုံမှမမြင်ရဘူး … ဘာလို့လဲ